नेपालको कानून अनुसार बयान फेर्ने गायिकालाई ४ वर्षसम्मको सजाय हुन सक्ने ! – Sudur Samaj
नेपालको कानून अनुसार बयान फेर्ने गायिकालाई ४ वर्षसम्मको सजाय हुन सक्ने !
पल शाह प्रकरणमा पीडित भनिएको पक्षले बयान फेरेको छ । कर णी अभियोगमा थुनामा रहेका शाह प्रकरणमा नाबालिग गायिकाले अदालतमा बकपत्र गर्ने क्रममा पलले कर णी नगरेको भनेर बयान दिएकी हुन् ।
.जिल्ला अदालत तनहुँ र नवलपुर दुवैको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पलविरुद्ध नाबालिगले बयान फेरेपछि घटनाले नयाँ रुप लिने देखिएको छ ।
जिल्ला अदालत तनहुँमा आइतबार बयानको क्रममा नाबालिग गायिकाले प्रहरीले ज’बर’ज’स्ती आफूलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएको तथा उजुरी दिनका लागि द’बाब दिएको भनेर बयान दिएको स्रोतको भनाइ छ । बकपत्र गराउँदा पीडित भनिएकी नाबालिग गायिकाले मात्र नभएर उनका बाबुले समेत बयान फेरेका स्रोतको दाबी छ।
जिल्ला अदालत तनहुँ र नवलपुर दुवैको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पलविरुद्ध नाबालिगले बयान फेरेपछि घटनाले नयाँ रुप लिने देखिएको छ ।
१६ वर्षभन्दा कम उमेरकी नाबालिगलाई कर णी गरेको पाइएको भन्दै शाहलाई १२ देखि १४ वर्षसम्म माग दाबी गर्दै दुबै अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । दुबै अदालतले शाहलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिए । हाल उनी तनहुँ कारागारमा छन्।
ज”बर ज स्ती क रणी मुद्दामा पी डितले अदालतमा बयान फेरेको अवस्थामा आ” रोपी नि’र्दोष ठ हर हुने सम्भावना बलियो हुन्छ । यद्यपि, अदालतले पी’डितको बकपत्रकै आधारमा मात्रै फैसला गर्छ भन्ने होइन । यो घटनामा पी डित ना बालिग भएकाले उनको बयानभन्दा जाहेरीकर्ता उनका बुवाको बयान महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि बुवाले पनि बयान फेरेमा अदालतले उनैलाई सजा य सुनाउन सक्ने का नूनी व्यवस्था छ ।
नेपाल को का” नून बमोजिम ब” ला त्का र को मु”द्दामा जा हेरीकर्ताले बयान फेरेमा आ” रोपी लाई माग गरिएको न्यूनतम सजायको आधा सजा य हुन्छ । गत चैत २२ गते राजपत्रमा प्रकाशित यौ” न हिं” सा विरु”द्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘ज” बर जस्ती क रणी सम्बन्धी मुद्दाको झुट्टा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई ज” ब”रज”स्ती करणी सम्बन्धी क”सुर गर्ने क”सुरदारलाई हुने न्यूनतम स जा”यको आधा स” जाय हुने छ ।’